Lwesibili 19 Januwari 2021
Indandatho UMimaya Dale, umqambi wendandatho ka-Ohgi ulethe umlayezo ongokomfanekiso ngale ring. Ukugqugquzelwa kwakhe kwendandatho kuqhamuka ezinhlosweni ezinhle abalandeli be-Japan folding abanazo nokuthi bathandwa kangakanani kusiko laseJapan. Usebenzisa igolide eli-18K eliphuzi nesafire kokuthile futhi bakhipha i-aura ebabazekayo. Ngaphezu kwalokho, i-fan folding ihlala kwindandatho engela enikeza ubuhle obuhlukile. Umklamo wakhe ubumbano phakathi kweMpumalanga neNtshonalanga.
Msombuluko 18 Januwari 2021
Incwadi Evulekile Konke kuqala ngokubonga. Uchungechunge lokuvula izincwadi olubonisa imisebenzi: UMemento akuyona nje isethi yamathuluzi kodwa futhi uchungechunge lwezinto ezibonisa ukubonga nemizwa yomsebenzisi. Ngama-semantics womkhiqizo nezithombe ezilula zobuchwepheshe obuhlukile, ukwakheka nezindlela eziyingqayizivele ezisetshenziselwa ucezu ngalunye lweMemento zinika umsebenzisi okuhlangenwe nakho okuvela enhliziyweni.
Indawo Yokudlela Yasejaphani Nebha
Sonto 17 Januwari 2021
Indawo Yokudlela Yasejaphani Nebha IDongshang yindawo yokudlela yaseJapan nebara etholakala eBeijing, eyakhiwa ngoqalo ngezindlela ezahlukahlukene nosayizi. Umbono wephrojekthi bekuwukudala indawo yokudlela eyingqayizivele ngokuhlobanisa izinzwa zaseJapan nezinto zesiko lamaShayina. Izinto zendabuko ezinokuxhumana okuqinile kwezobuciko nezobuciko kula mazwe womabili zimboza izindonga nophahla lwendalo ukudala i-ambience obusondelene. Izinto zemvelo nezinokulondolozeka zifanekisela ifilosofi elwa namadolobha endabeni yaseChinese, ama-Sage aSikhombisa we-bamboo Grove, kanye nengaphakathi likhipha umuzwa wokudlela ngaphakathi kwesihlahla soqalo.
Isitulo Sohlalo Siyizinhlobo
Mgqibelo 16 Januwari 2021
Isitulo Sohlalo Siyizinhlobo Ngokushesha u-Osker ukumema ukuthi uhlale futhi uphumule. Lesi situlo esinemiklamo sinomklamo odalulwe kakhulu futhi ogobile futhi ohlinzeka ngezici ezihlukile njengama-joeries wamapulangwe acatshangelwe kahle, izihlangu zesikhumba kanye nomshini wokubopha ngezimbali. Imininingwane eminingi kanye nokusetshenziswa kwezinto ezisezingeni eliphakeme: isikhumba nokhuni oluqinile kuqinisekisa ukwakheka kwesimanje nokungaphelelwa isikhathi.
Lwesihlanu 15 Januwari 2021
Indlu I-Zen Mood yiprojekthi ebonakalayo egxile kubashayeli abathathu ababalulekile: I-Minimalism, ivumelana nezimo, kanye ne-aesthetics. Izingxenye ngazinye zinamathiselwe ukudala ukubukeka okuhlukahlukene nokusetshenziswa: amakhaya, amahhovisi noma ama-showrooms angenziwa esebenzisa amafomethi amabili. Imodyuli ngayinye yakhelwe nge-3.20 x 6.00m ehlelwe ngo-19m² ngaphakathi kwama-01 noma ama-02 phansi. Ukuhamba kwenziwa ikakhulukazi ngamaloli, nakho kungahanjiswa futhi kufakwe ngosuku olulodwa. Kungumklamo oyingqayizivele, wesimanje owakha izikhala ezilula, ezinempilo futhi zokudala ezenziwe zenziwa ngendlela ehlanzekile neyakhiwe yezimboni.
Lwesine 14 Januwari 2021
Uhlelo Lokufeza Idizayini yesimanje ehluke kakhulu nemininingwane ecacile yeHirarchie ihlukanisa uhlelo olusha. Uhlelo lokujwayeza ukusebenza lusebenza masisha futhi luzothuthukisa ikhwalithi yenkonzo ekhokhela isikhumulo sezindiza. Izindlela ezibaluleke kakhulu eduze nokusetshenziswa kwefonti entsha, isici somcibisholo ohlukanisa ukwethulwa kwemibala ehlukene, ehlukile. Kwakunezici ezisebenzayo nezengqondo, njengokubonakala okuhle, ukufundeka nokuqoshwa kwemininingwane ngaphandle kwezithiyo. Amacala amasha e-aluminium anokhanyiso lwe-LED yesimanje, eyenziwe kahle. Kungezwe imibhoshongo yeSignage.
Indandatho Incwadi Evulekile Indawo Yokudlela Yasejaphani Nebha Isitulo Sohlalo Siyizinhlobo Indlu Uhlelo Lokufeza